Xarunta ugu Weyn Amisom oo la xiray 5 Maalin, Baaris ayaa Guud ahaanteed lagu sameynayaa. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xarunta ugu Weyn Amisom oo la xiray 5 Maalin, Baaris ayaa Guud...
Xarunta ugu Weyn Amisom oo la xiray 5 Maalin, Baaris ayaa Guud ahaanteed lagu sameynayaa.
Sida lagu xusay xaashi uu soosaaray maanta midowga Afrika xerada Xalane oo saldhig u ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo shaqaalaha hay’adaha QM, qaarkood waxa ay xirnaan doontaa muddo 5; maalin ah oo ka bilaabaneysa maanta oo ah Khamiis-9- Novmber, kuna eg 13; November 9, 2017.
Sida lagu xusay Warka ka soo baxay Amisom, ujeedka ka dambeeya xiritaanka xerada Xalane oo ah Fadhiga dhammaan howlha midowga Afrika ee Soomaliya ayaa ah baaritan dhanka nabadglyada xerada ah iyo hubin lagu sameynayo dhaqdhaqaaqyada howlaha ka socda xerada.
Dhammaan shaqooyinka dhismaha, shirkadaha ganacsiga ee ku jira ama ka dhex shaqeeya xerada ayaa la joojinayaa, sidaas oo kalana shaqaalaha kala duwan ee ka dhexshaqeeya xerada Xalane ayaa waxa lagu sameynayaa dib eegid iyo hubinta shaqadooda, aqoonsiga iyo hab dhaqankooda, waxaa iyana la hakinayaa dhaqdhaqaaqa gaadiidka waaweyn iyo gawaarida inta uu socdo baaritaanku, iyada oo laguu deynayo xerada dhexdeeda Eeyo baarayaal ah.
Qoraalka ayaa lagu muujiyey farriin ku socotay shirkadaha ka dhex shaqeysta xerda Xalane; in ay joojiyan dhammaan shaqooyinka dhismaha, ganacsiga, iyada oo si gaar ah loo hubinayo shaqaalaha u dhashay dalka iyo kuwa shisheeyaha ah.
Hoteelada ayaa la faray in ay keenaan liiska dhammaan macaamiishooda, iyo qololaka ay deggan yihiin iyo howlaha ay aqabtaan.
Waxa la faray in ay u fududeeyaan dhammaan baarayaasha oo ay ku jiraan Eeayaha uriya walxaha qarxa, si ay u baaraan una hubiyaan dhammaan walxaha qarsoon ee hubka iyo walxaha qarxaba.
Waxa kale oo lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha xiriirka la leh Xerada Xalane in ay joojiyaan dhammaan dalabaadka inta uu socoda baaritaanku, iyada oo xitaa haddii la fasaxay adeggaas ka hor xayiraadda ay tahay in la joojiyo.
Waxa kale oo ku jira qoraalkan in laga doonayao shirakadaha ganacsiga iyo hoteeladaba in ay keenaan si qof qof ah heshiisyada ay kula jiraan dadka iyo shirkadaha kale, waxaana la soo raacinayaa aqoonsiga iyo dhammaan wixii caddeymo ah sida lambarada aqoonsiga
Shirkadaha nabadgelyada ku shaqeeya ee gaarka loo leeyahay ayaa iyagana la faray in ay keenaan liiska iyo tirakoobka rasaasta ay haystaan iyaga oo soo raacinaya ruqsadda ama ogolaanshaha haysashada hubka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Tuhunka jira ee sababay baaritaankan
ku dhawaad 700; oo shaqaalaha aan joogtada ahayn ee Garoonka Aadan Cadde iyo Xerada Xalane ayaa laga hakiyay shaqadaas
Go’aanka shaqada lagu joojiyey ayaa yimid kaddib markii ay soo baxday in 15; ka mid ah shaqaalaha ay weerar ka geysan doonaan gudaha Garoonka.
Sidoo kale waxaa jira xog ah in labo ka mid ah Gaadiidka AMISOM; oo ay Al-shabaab horay u qabsadeen lagu weerarayo Garoonka.
Walaaca ugu badan waxaa uu soo baxay markii Mareykanka iyo Qaramada Midoobey ay shaqaalahooda uga digeen amaanka Muqdisho iyo weerarro la tuhmayo.
Labada Gaari ee AMISOM ayaa la sheegayaa in loogu talagalay in ay isqarxiyaan kaddibna 15; ka Qof ee shaqaalaha ka mid ah ay ka dhexdagaallami doonaan Garoonka iyo Xerada Xalane.
23316395 10214841848188092 3036648838610006725 N